လုပ်ငန်းစဉ်၏အဘယျသို့သော CSRSS.EXE - ဖိုင် FORMAT - 2019
Excel ကိုမှအမျိုးမျိုးသောတွက်ချက်မှုထုတ်လုပ်အသုံးပြုသူများအမြဲဆဲလ်ထဲမှာ output ကိုဖွစျစနေိုငျသောတန်ဖိုးများ, တစ်ခါတစ်ရံအစီအစဉ်ကိုတွက်ချက်အသုံးပြုရသောသူတို့နှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ကြဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားကြဘူး။ ဤသည်ဒဿမကိန်းတန်ဖိုးအထူးသဖြင့်မှန်သည်။ သငျသညျနှစျခုဒဿမဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူအရေအတွက်ကိုပြသသောဂဏန်း format ကိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဥပမာ, ကယုံကြည်နေသည့် Excel ကိုဒေတာနှင့်ဒါမဆိုလိုပါ။ အဘယ်သူမျှမ, default အနေဖြင့်ယင်းအစီအစဉ်တွင်ဆဲလ်ရုံနှစျခုဇာတ်ကောင်ပြလျှင်ပင်, 14 ဒဿမသောနေရာများမှတက်မှတ်တော်မူ၏။ ဤအချက်ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်မနှစ်မြို့ဖွယ်အကျိုးဆက်များဆီသို့ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်, အတိအကျ screen ပေါ်မှာတူရှာနိုင်ပါတယ် setting ကိုထည့်သွင်းပါ။
သင်တစ်ဦးအပြောင်းအလဲ settings ကိုလုပ်မတိုင်မီဒါပေမယ့်သင်ကသင်အမှန်တကယ်ပြသအဖြစ်တိကျစွာထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါလျှင်အထဲကရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်အချို့ကိစ္စများတွင်, ဒဿမဆိုင်းဘုတ်များ, ထိုတွက်ချက်မှုများခြုံငုံတိကျမှန်ကန်မှုကိုလျှော့ချမည်သည့်ဖြစ်နိုင်သောတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာအကျိုးသက်ရောက်မှု၏တွက်ချက်မှုတွေနဲ့ဂဏန်းအရေအတွက်များတဲ့သုံးတဲ့အခါ။ ထို့ကြောင့်, ဒီ setting များအတွက်အများကြီးလိုအပ်နေခြင်းမရှိဘဲ, အဲဒါကိုအလွဲသုံးစားမပြု သာ. ကောင်း၏။
ဒါကြောင့်လာမယ့်အစီအစဉ်ကို၏အခွအေနအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်, မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိတိကျစွာပါဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျနှစျခုနံပါတ်များကိုထပ်ထည့်ဖို့တာဝန်ရှိတယ် 4,41 နှင့် 4,34ဒါပေမယ့်လိုအပ်ချက်ကတော့ဒဿမအမှတ်ပြီးနောက်စာရင်းတစ်ခုသာဒဿမအရပ်ပေါ်မှာပြသခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သံမဏိပြသတန်ဖိုးများတဲ့စာရွက်ပေါ်ဆဲလ်သင့်လျော်သောပုံစံချပေးရာ၌ခန့်ထားပြီပြီးတာနဲ့ 4,4 နှင့် 4,3သို့သော်ဆဲလ်များ၏ရလဒ်အဖြစ် program ကို display တွေဖြည့်စွက်နံပါတ်မပါသောအခါ 4,7နှင့်တန်ဖိုး 4,8.
ဒါကပဲ Excel ကို၏အမှန်တကယ်တွက်ချက်မှုနံပါတ်ယူဆက်လက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်ပါသည် 4,41 နှင့် 4,34။ အဆိုပါတွက်ချက်မှုရလဒ်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် 4,75။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တစ်ဦးတည်းသာဒဿမရာအရပျမြားနှငျ့နံပါတ်များပြသမှုကို format ဖို့တောင်းပြီးတော့ရှာနိုင်ပါတယ်နှင့်ဆဲလ်အရေအတွက်ကိုပြသခဲ့ကြသည်အဖြစ် 4,8။ (ဒီကိစ္စမဟုတ်ပါသော်လည်း) ဒါကြောင့် program ကိုအမှားတစ်ခုဖန်ဆင်းတော်မူပြီကြောင့်ပေါ်လာစေရန်။ ဒါပေမဲ့စာရွက်ပေါ်ကြောင်းစကားရပ် 4,4+4,3=8,8 ဒါဟာအမှားတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဤကိစ္စတွင်, တကဆင်ခြင်တုံတရားဖြေရှင်းချက်အတိအကျ screen ပေါ်မှာတူ setting ကိုပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါ Excel ကို program ကိုမှတ်ဉာဏ်အတွက်စောင့်ရှောက်သောနံပါတ်များကိုပေးသောနှင့်ဆဲလ်တန်ဖိုးကိုအညီပြမတွက်ချက်ပါလိမ့်မယ်။
ကြောင်း၏စစ်မှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို Excel ကိုတွက်ချက်ဖို့အချိန်ယူလေ့လာသင်ယူနိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ပါရှိသောသည်အဘယ်မှာရှိဆဲလ်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ အဲဒီနောကျ, အပုံသေနည်း bar မှာမှတ်ဉာဏ် Excel ကိုထဲမှာသိမ်းထားတဲ့သောယင်း၏တန်ဖိုးဖော်ပြရန်။
သင်ခန်းစာ: Excel ကိုအတွက်ရှာနိုင်ပါတယ်နံပါတ်များ
Excel ကိုလက်ရှိဗားရှင်းတွင်တွေ့မြင်အဖြစ်အတိအကျ setting ကို enable
အခုဖော်ပြပေးအဖြစ်တိကျစွာဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေကြကုန်အံ့။ ပထမဦးစွာပြုလုပ် Microsoft က Excel ကို 2010 အစီအစဉ်ကိုနှင့်၎င်း၏နောကျပိုငျးဗားရှငျး၌ပြစ်မှားမိရဲ့ပုံကိုကြည့်ပါ။ သူတို့ကဒီအစိတ်အပိုင်းအညီအမျှပါဝင်သည်ရှိသည်။ ပြီးတော့ကျနော်တို့ Excel ကို 2007 ခုနှစ်နှင့် Excel ကို 2003 ခုနှစ်ကပြသအဖြစ် Precision ကို run ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ။
အဆိုပါ tab ကို Moving "File".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "န့်သတ်ချက်များ".
ဖြန့်ချိနောက်ထပ် settings ကိုပြတင်းပေါက်။ အပိုင်းက Moving "အဆင့်မြင့်", ဘယ်သူ့အမည် window ၏လက်ဝဲဘက်မှာစာရင်းထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။
တစ်ချိန်ကအပိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ "အဆင့်မြင့်" ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးသောပရိုဂရမ် settings ရှိပါတယ်ထားတဲ့အတွက်ပြတင်းပေါက်၏ညာဘက်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ရွေ့လျားနေကြသည်။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှု settings ကိုကျနော်တို့တွေ့ပါ "ဟုအဆိုပါစာအုပ်၏စည်းကမ်းချက်များကိုခုနှစ်တွင်"။ သို့သော်လည်း parameter အနားမှာစစ်ဆေးမှုများအမှတ်အသား Set "ပြသအဖြစ်တိကျ Set".
ထို့နောက်တစ်ဦးပေးတဲ့ dialog box ကိုတွက်ချက်မှုတိကျမှန်ကန်မှုကိုလျှော့ချကြောင်းဤသို့ဖော်ပြသည်သောပုံပေါ်ပါတယ်။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
ထို့နောက် Excel ကို 2010 ခုနှစ်, အပေါ်က Program ကို mode ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မည် "ပြထားတဲ့အတိုင်း Precision".
ဒီ mode ကို disable လုပ်ဖို့, သင် setting ပတ်သက်. ရွေးချယ်စရာ box ကို uncheck လုပ်သင့်တယ် "ပြသအဖြစ်တိကျ Set", ထိုအခါ button ကို click "အိုကေ" ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေတွင်။
Excel ကို 2007 ခုနှစ်နှင့် Excel ကို 2003 တွင်တွေ့မြင်အတိအကျအဖြစ် setting ကို enable
အခုတော့ရဲ့ပြီးသားပေါရာဏဟုယူဆသော်လည်းတိကျ mode ကို Excel ကို 2007 ခုနှစ်နှင့် Excel ကို 2003 အတွက် screen ပေါ်မှာအဲဒီဗားရှင်း activated ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်မှာအကျဉ်းကြည့်ယူပါစေ, ဒါပေမယ့်, သို့ရာတွင်၎င်းတို့သည်အသုံးပြုသူများကအများကြီးစပ်လျဉ်းအသုံးပြုကြသည်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာ Excel ကို 2007 ခုနှစ်ကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ပါ။
ပြတင်းပေါက်၏အပေါ်ပိုင်းဘယ်ဖက်ထောင့်ရှိ Microsoft Office ကိုသင်္ကေတပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ပေါ်လာစာရင်းထဲမှာ, select လုပ်ပါ "Excel ကို Options ကို".
ဖွင့်လှစ်သောပြတင်းပေါက်၌, select လုပ်ပါ "အဆင့်မြင့်"။ အုပ်စုတစ်ခု setting ကိုအတွက်ပြတင်းပေါက်၏ညာဘက်အစိတ်အပိုင်းအတွက် "ဟုအဆိုပါစာအုပ်၏စည်းကမ်းချက်များကိုခုနှစ်တွင်" setting အကြောင်းကို tick တည်ထောင်ရန် "ပြသအဖြစ်တိကျ Set".
ကိုယ့်မျက်နှာပြင်နဲ့တူ Mode ကိုဖွင်လိမ့်မည်။
Excel ကို 2003 ဗားရှင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကွဲပြားခြားနားသော Modes သာ ပို. ပင်ကို enable ။
မီနူးဘားတန်းများတွင်ပစ္စည်းပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ "ဝန်ဆောင်မှု"။ စာရင်းမှာတော့ရာထူးကို select "န့်သတ်ချက်များ".
ဝင်းဒိုးကို parameters တွေကိုပြေး။ ဒါဟာ tab ကိုသွားပါ "Calculator"။ ယင်းနောက်အမှတ်အနားမှာတစ်ဦးကို tick သတ်မှတ်ထား "ပြထားတဲ့အတိုင်း Precision" နှင့် button ကို click "အိုကေ" ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေတွင်။
သငျသညျမွငျနိုငျအဖြစ် Excel ကိုအတွက် screen ကိုအတော်လေးလွယ်ကူသည်အဖြစ်, မသက်ဆိုင်အဆိုပါအစီအစဉ်၏ဗားရှင်းသည်တိကျ mode ကိုခန့်ထား၏။ တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အမှု၌ဤ mode ကို run သို့မဟုတ်မမှရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အဓိကအရာ။